Very Fijery Miabo Ny Filohan’i Kazakhstan Mandre Ny Lakolosim-Patin’ny Vola Tenge · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2016 5:33 GMT
Pikantsary avy amin'ny tranonkala oibai.kz mampiseho ny sandan'ny barilin'ny solika sy ny tenge volan'i Kazakhstan oharina amin'ny vola vahiny dollar sy euro.
Mazava fa miharatsy ny toe-draharaha ho an'ny Kazakhstanis rehefa ny filoha no miresaka ny tsy ividianana voasary makirana lafovidy ao amin'ny bazarin'ny firenena manankarena solika — vao volana vitsy monja izay dia niteny tamin'ny olom-pirenena izy mba hianatra ny tsy hihinana foie gras.
Sarotra ny miteny hoe firenena sôvietika teo aloha iza no tena voadona mafy ny fisosany miakatra noho ny fihintsanan'ny vidin'ny solika sy ireo zavatra hafa amin'ny ankapobeny fa kandidà lehibe miaraka amin'i Rosia sy Azerbaijan amin'izany i Kazakhstan.
Natokisana ho tigran'ny faritra manana an'i Nursultan Nazarbayev, mpitondra tsy refesi-mandidy 75 taona manana vina, tsy nahatrena intsony tao anatin'ny herintaona na mahery kely izao ny toekaren'ilay firenena ao Azia afovoany nanana toekarena matanjaka indrindra.
Nihena atsasa-bidy ny sandan'ny tenge miohatra amin'ny dollar hatramin'ny nidirana tamin'ny fihevahevan'ny sandam-bola mihoatra amin'ity vola maitso [dôlara] ity tamin'ny volana aogositra farany teo ary mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidin-tsakafo sy ny fidinan'ny fari-piainana ny olom-pirenena ankehitriny.
Ho fanoherana izany tokotanin-tsehatra izany no nanoroan'ny filoha mihoatra ny fitopolo taona Nursultan Nazarbayev ny Kazakhs “hifoka rivotra lalina araka ny filazan'ny olona mpanao yoga sy hanadino ny momba ny dollar”, raha nampahafantatra azy ireo ny dia nataony tamin'ny “tsena maro” tao an-drenivohitra Astana tamin'ny herinandro.
Mfanohitra amin'ny tabataban'ny vahoaka amin'ny fahalafosan'ny vidim-bokatra, dia nolazainy tamin'ny fanehoan-kevitra nandritra ny kongresy mialoha ny fifidianana nataon'ny antokony mitondra Nur Otan, fa maro ny vokatra no mora kokoa ny vidiny noho ny tamin'ny herintaona tahaka izao.
Ny iray manivaka amin'izany ny vidin'ny voasary makirana nohafarana avy any ivelany, saingy afaka “tsy mividy izany” ny olom-pirenena, hoy ny filazany.
Toy ny fanamarihan'i Nazarbayev tamin'ny herintaona [mg] momba ny foie gras — izay maro amin'ny Kazakhs no tsy nandre izany mihitsy, na nanandrana — dia notsenain'ny tsy finoana ny fanehoan-keviny hanandrana izany ao amin'ny bazary ao an-toerana.
Tamin'ny fitsapan-kevitra an-tserasera natao tamin'ny mpamakin'ny tolotra kazakh amin'ny RFE/RL mihoatra ny 300, dia mihoatra ny antsasany amin'ny namaly no mihevitra fa tsy nankany an-tsena izany i Nazarbayev fa namaky fotsiny ny taratasy nomen'ny mpanolo-tsaina azy hovakiany.
Mihoatra ny 30% tamin'ny namaly no nilaza fa nivilana ny tatitra nomena azy tamin'ny vidim-bokatra.
Na dia nahitana fanoherana madinidinika momba ny antoka nakana trosa sy ny faharatsian'ny toekarena amin'ny ankapobeny aza i Almaty tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, dia tsy nanao famoriam-bahoaka mitabataba koa ilay mpitondran'i Kazakhstan tsirefesimandidy.
Fa misy karazana hetsika manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana nipongatra tamin'ny tranonkala iray nasongadin'ny tatitry ny Reuters vao haingana :
Tsy mampiseho na inona na inona ankoatra ny famoahana ny sandan'ny vola tenge an'ity firenena sôvietika teo aloha ity sy ny vidin'ny solika manerantany – samy mijotso izy roa ireo – nivoaka farany ambonin'ny sarin'ny lapan'ny governemanta ny habaka mitondra ny anarana oibai.kz
Ny hany fanehoan-kevitra dia feo ratsin'ny pianô rehefa mizara ny rohin'ny habaka ao amin'ny media sosialy miampy ‘tsoraka’ sy ikônin-dehilahy manao ilay satroka Kazakh nentim-paharazana, ary ny tanany manampina ny vavany mitanatanan'ny hatairana.
Oibai.kz izany aloha no loharanom-baovao an-tserasera iray farafahakeliny tsy miraharaha ny fiangavian'i Nazarbayev “hanadino ny dollar”.
Manao izay mampihomehy mampivily resaka ihany koa ny lahatsoratr'i Rinat Balgabaev, izay mahazo ‘tia’ anjatony avy amin'ny mpanjohy azy isan'andro amin'ny lahatsoratra fohy mamely ataony amin'ny fijaliana ara-toekarena mahazo ny firenena.
Toy izao manaraka izao ny iray amin'ny lahatsoratra nataony:
Rehefa hita fa very tanteraka ny sandan'ny solika ary tahaka ny tsy ho avotra ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy io sehatra io, dia heverina fa fotoana izao ny hanondranana zezika ôrganika. Tondro manana ny hoaviny tokoa izy io rehefa hita fa lalina tokoa isika ankehitriny eo amin'ny sehatry ny diky.
Amin'izao vaninandro ankehitriny izao dia mihavitsy tokoa ny Kazakhstanis te-hino fa manana fofon-draozy izany diky izany.
21 ora izayKazakhstan